Xukuumada Soomaaliya oo qalyo dhaan u dirtay Beesha Caalamka
By Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha + GO
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa maanta guddoomiyay shir ay kasoo qayb galeen safiirrada wadamada amniga ka taageeraa Soomaaliya iyo wakiillada beesha caalamka, loogana hadlay amniga iyo xoreynta deegaannada argagaxisadu uga sugantahay dalka.
Qaylo dhaanta taageero raadinta ayaa kusoo aadeysa iyadda oo ay Al-Shabaab sarre u qaadey weeraradda ay ka fulineyso gobolada dalka iyo caasimadda, iyadda oo adeegsaneysa qaraxyo iyo weeraro toos ah.
Todobaadkan, dhowr weerar oo ay ka fulisay labadda Shabelle iyo Muqdisho ayaa waxay ku dishay in ka badan 20 ruux, waxaana amniga iyo dagaalka AlShabaab uu kamid ay kamid yihiin arrimaha ay ku fashilantay dowladda.
Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha + GO
Beesha Caalamka oo bogaadisay heshiiska dhinacyadda Jubaland
Soomaliya 28.04.2020. 17:00
Saaxiibada caalamka ayaa sidoo kale baaq kasoo saarey xiisadaha ka jira qaybo kamid ah gobolka Gedo.